Kitra – Mondial 2026: Etazonia-Mexique-Canada no hiara-hampiatrano ny lalao
jeudi, 14 juin 2018 10:29
Nandritra ny fivoriambe faha-68 ny Federasiona iraisam-pirenena amin’ny baolina kitra, na FIFA, no nisafidianan’ny mpizaika fa ireo firenena telo miaraka Etazonia-Mexique-Canada no hampiantrano io Mondial 2026 io. Maroc no nifaninana taminy.
Ekipam-pirenena miisa 48 no hifaninana manomboka amin’io 2026 io, izay hitsinjara amina vondrona miisa 16 mandritra ny fifanintsanana, raha 32 izy amin’izao hotanterahina any Rosia ny 14 jona ka hatramin’ny 15 jolay 2018, sy ny hatao any Qatar amin’ny 2022.
Hampiatrano lalao folo avy i Canada sy Mexique, raha enimpolo ny lalao hatao any Etazonia. Hotanterahina any amin’ity firenena farany ity avokoa ny lalao manomboka eo amin’ny ampahefa-dalana amin’io Mondial 2026 io.
Tamin’ny 2002 dia firenena roa Corée sy Japon no niara-nampiantrano ny Mondial tamin’io andiany io.